Irreechi mallattoo tokkummaa Oromoo fi ibsituu duudhaa Oromummaati. | QEERROO
Gabaabumatti, ayyaanni Irreechaa mootummaa abbaa irree Wayyaanee/EPRDF aangoorraa kaasuuf qooda olaanaa kan taphate, seenaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti yoomuu kan dagatamu miti. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa ayyaanni Irreechaa kun akka kabajamu dhiibbaa waan taasiseef danqaan hedduu isa mudateera.
Addi Bilisummaa Oromoo bara 2011 erga Qeerroo Bilisummaa Oromoo hundeessee boodas dargaggoonni Oromoo akka Qabsoo Bilisummaa Oromootti makaman karaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo waamichi godhamaa tureera. Waamicha Qeerroo Bilisummaa Oromoo kanaanis Fincilli Diddaa Gabrummaa fi Xumura Gabrummaa itti fufee kufaatii Wayyaanee fideera.
Akka fakkeenyaatti kaasuuf, bara 2015 Qeerroon Bilisummaa Oromoo Irreecha Malkaa Hora Harsadee (Bishooftuu) irratti irbuu waliif seenanii qabsoo itti fufuuf waliif kakatan. Mana barumsaafi naannawa keessa jiraatan hunda keessatti qabsoo akka itti fufan, kaayyoo gootota wareegamanii akka galmaan ga’an waliif kakatan. Akkuma irbuu seenanitti manneen barnootaafi bakka jiran hundatti qabsoo itti fufuudhaan kufaatii Wayyaaneef sababa ta’anii seenaa qabsoo sabootaa keessatti seenaa adda ta’e galmeessan.
Ayyaana Irreechaa kana waggaa waggaan kabajuudhaaf qabsaa’ota hedduutu wareegama kaffale. Bara 2016 kufaatii maayii Wayyaanee jala ayyaana Irreechaa Malkaa Hora Harsadee irratti ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa’aman bakka tokkotti dhuman. Kunuu ta’ee uummatichi wareegama kamuu kaffalee ayyaanicha kabajachuuf murteeffatee itti fufeera.
Ayyaana Irreechaa waggaa waggaan kabajamu kan Addi Bilisummaa Oromoo fi Qeerroon Bilisummaa Oromoo sadarkaa kanaan ga’uusaaf qooda olaanaa gumaachaniifi wareegama ulfaataa itti kaffalan bara kana bara 2021 kanas kabajamuuf jala bultiirra jirra.
Irreecha bara 2021 kana yommuu kabajnu qabsaa’ota hedduu mana hidhaa jiran yaadachaa isaaniis sagalee ta’aa, gootota Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti wareegamanii asiin nu ga’an yaadachaa akka kabajannu Qeerroon Bilisummaa Oromoo waamicha dhiyeessa. Kanuma waliin, simboo ayyaanichaa kan ta’e naamusa Oromummaa agarsiisaa, ibsituu sabichaa kan ta’e uffataalee aadaa fi faayaa Oromummaa calaqqisiisuun dabaalamnee akka kabajannu wal yaadachiifna. Haalli Irreechi kun itti kabajamu danqaa hedduu qabaatus, faajjii Qabsoo Bilisummaa Oromoo ol kaasnee, sirna mootummaa abbaa irree gita bittoota Habashaa gadi nurratti dhaabaa jiru isa dhumaaf ofirraa kaasuuf akkuma baroota darbanii irbuu keenya haa haaromfannu. Gootota Qabsoo Bilisummaa Oromoo galmaan ga’uuf har’allee dirree qabsoo jiran waliin dhaabbannee, hidhamtoota siyaasaa keenyaaf sagalee taanee nagaan ayyaanicha akka goolabnu dhaammanna.
Dhuma irratti, irra deebi’uun: hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kanneen kutaalee Oromiyaa adda addaatti hidhamanii jiran, kanneen qabsoo kana fiixa basuuf ammallee dirree qabsoo jiran Waraanni Bilisummaa Oromoo, kanneen wareegama lubbuu kaffalan, bu’aa qabsoo fi wareegama keessanii kan ta’e Ayyaana Irreechaa baga geessan jechaa, uummaata Oromoo bal’aafis ayyaana milkiifi gammachuu akka isiniif ta’u hawwina.